နှစ်သစ်ကူး အထူးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ရောင်းချပေးနေတဲ့ DIY ရဲ့ BBQ Set များ | The Restaurant Guides for Myanmar
နှစ်သစ်ကူး အထူးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ရောင်းချပေးနေတဲ့ DIY ရဲ့ BBQ Set များ
(၂၀၂၀) နှစ်သစ်ကူးကတော့ ဆိုင်တိုင်းလိုလို အပြိုင်အဆိုင် ပရိုမိုးရှင်းတွေ ပေးနေကြတဲ့ နှစ်ပါပဲနော်။ ဒီလို ပရိုရှင်းတွေ ပေးကြတဲ့ ဆိုင်တွေထဲ DIY Hotpot & BBQ ဆိုင်လေးကလည်း စားသုံးသူတွေအတွက် ခရစ္စမတ်နဲ့ New Year အထူး ပရိုမိုးရှင်းတွေ ပေးအပ်နေပြန်ပါပြီ။
ပေးနေတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေကတော့ မကြာခင်ကမှ အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ DIY Family Hotpot Set, Family BBQ Set နဲ့ DIY ငါးခဲပတ်ကင် ကို Discount 10% ပေးနေတဲ့အပြင် ဆိုင်မှာရှိတဲ့ တစ်ခြား Menu တွေအားလုံးကို 5% Discount ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထဲမှာမှ DIY ရဲ့ စားသုံးသူတိုင်း အကြိုက်တွေ့ကြတဲ့ DIY Family BBQ Set မှာ ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမယ်နော်။
အသား (၅) မျိုး
အမဲသားလွှာ (မာလာ) >> (၂) ပွဲ
၀က်သားလွှာ ( ပျားရည်) >> (၂) ပွဲ
၀က်သုံးထပ်သားလွှာ >> (၂) ပွဲ
ကြက်သားလွှာ (ငံပြာရည်) >> (၂) ပွဲ
၀က်နံရိုး ( ငရုတ်ကောင်း ) >> (၁) ပွဲ
ပင်လယ်စာ (၄) မျိုး
ပုဇွန်မြီးနီ >> (၁) ပွဲ
ရေချိုပုဇွန် >> (၁) ပွဲ
ပြည်ကြီးငါး >> (၁) ပွဲ
ငါးသားလွှာ >> (၁) ပွဲ
အသားလုံး (၆) မျိုး
ကြက်ကြော + ကြက်အူချောင်း
ငါးတို့ဟူး + မှို၀က်သားသုံး
အသီးအရွက် (၉) မျိုး
ကြာစွယ် + အာလူး
ပြောင်းသေး + ပန်းစိမ်း
ကန်စွန်းဥ + ပိန်းဥ
အပ်မှို + ရုံးပတေသီး
အပေါ်က ပြောထားတာတွေ အကုန်လုံး ပါမယ့်အပြင် ဟင်းရည်တစ်အိုး၊ ကိုလာ (၁.၅)လီတာ ဘူးကြီးတစ်ဘူးနဲ့ DIY အထူးဆော့စ်(၄) ထုပ်ပါ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒါ့အပြင် အထူးအခွင့်အရေး Service အနေနဲ့ BBQ မှာယူသူတိုင်းကို…
အကင်စက် (၁) စက်
အကင်ညှပ် (၂) ခု
ပန်းကန် + ပန်းကန်လုံး + တူ + ဇွန်း (၄) စုံ
ဆီဗူး (၁) ဗူး
စတာတွေကိုလည်း အစားအသောက် လာရောက်ပို့ဆောာင်တဲ့ အချိန်မှာ အခမဲ့ ငှားရမ်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး၊ စားသောက်ပြီးချိန် ဆိုင်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့ အိမ်အထိ လာရောက်သိမ်းဆည်းပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်နော်။
ဒီလိုမျိုး အမိုက်စား BBQ Family Set တစ် Set ကိုမှ (၃၆,၀၀၀) ကျပ်တည်းနဲ့ မှာယူနိုင်မယ့်အပြင် Discount ကလည်း 10% ဆိုတော့ ဘာလိုသေးလဲနော်။
DIY ဆိုင်ခွဲတွေရဲ့ လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတော့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
15 % off လား ? Double Promotionလား ? Sushi By The Two က စိတ်ကြိုက်ရွေးလိုက်တော့နော်
Jan Jan Jan ရဲ့ ရှယ်တန်တဲ့ 20/40 Promotion